ရန်လင်းအောင် ●ပြောဇာတ် – ၁ ၆ | MoeMaKa Burmese News & Media
နိုင်မြန်မာ – ရှာပေဦးတော့ ထမင်းထုပ်ကြီးနဲ့
မှတ်တိုင်ပါတယ် (Saung Yun La)
မြင့်ဦးဦးမြင့် - ငါ့မှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ မရှိဘူး
မင်းညွန့်လှိုင် -ပေါ င်းတ ည်
အောင်ဝေး - ချ စ် လို့ေ ရးတဲ့ က ဗျာ( ၉ )
သ စ်ကောင်းအိ မ် - ဆ င်ခြေ ဖုံး
ကျော်ဟုန်း - မျိုးဆက် စက်ဝန်း မြင်တွေ့ ခဏ်း
မောင်စိုးချိန် - မိစ္ဆာတို့ဖန်တီးတဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုနွံအိုင်ထဲမှာ
နေချိုသွေး - နိုင်ငံဟာ နစ်နေတဲ့ ကန္တာရလိုကဗျာ
ရန်လင်းအောင် ●ပြောဇာတ် – ၁ ၆
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၆
ဟိုး …. ဟိမဝန္တာအရပ် တောင်အရေးသုံးခုအလွန်မှာ
ဒီလိုဏ်ဂူအရောင်ဟာ သိပ်ကြည် သိပ်သန့်
ခြင်္သေ့အရိပ်ကြီး ထင်လေ မြင်ရလေ
တဖြည်းဖြည်း ပိန်ချုံး ချိနဲ့လာရတယ်ဆိုပဲ။
ဒါနဲ့ မဖြစ်ချေဘူး ဆိုပြီး
ဘာအရိပ်မှမဖြစ် ခြင်္သေ့ကြီးလည်း လစ်ကိုလစ်ရစေ့မဟဲ့ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့
ပတ္တမြားဂူကို ညစ်တွန်းတွန်းကြပါလေရောလား ….
ဂူနံရံက ကြည်လေ သန့်လေ ပိုလက်လေဆိုတော့
ပတ္တမြားဂူက အရာမယွင်း အရောင်မမှိန်
ဝက်တွေသာ စိတ်ပိန်ပြီးရင်းပိန်လို့ 
ဒါနဲ့ စောစောကပြောတဲ့ ဂူနားကရသေ့လေးဆီသွားပြီး
ပတ္တမြားစစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်လုပ် မညစ်
ဖျက်ချင်သလိုဖျက် အရောင်ပိုလက်မှာပေါ့ 
ကိုရွှေဝက်တို့ရေ …” လို့